‘कमले’ बन्दा यस्तो देखिए अनुपविक्रम (भिडियो) | THE CINEMA TIMES
सय करोड क्लबमा सलमानको नरोकिने रेस !
दयाहाङको ‘भैरे’ ट्रेलर रिलिज
डेब्यु समाचारप्रति तेरियाको खण्डन
NepalNews Author:	The Cinema Times - May 18, 2017
‘कमले’ बन्दा यस्तो देखिए अनुपविक्रम (भिडियो)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । अभिनेता अनुपविक्रम शाहीको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म ‘कमलेको विहे’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच फिल्मको ‘टाकान टुकुन’ बोलको गीत सार्वजनिक गरियो ।
सार्वजनिक गीतमा अनुपविक्रम नयाँ नियमित भन्दा भिन्न लुक्समा देखिएका छन् । राजनराज सिवाकोटीको शब्द/संगीतमा सजिएको गीतमा माण्डवी त्रिपाठी र संगीतकार स्वयम्को स्वर समावेश छ । गीतमा दीपकमान सिंहको कोरियोग्राफी रहेको छ । महेश दवाडीको पटकथा/संवाद रहेको फिल्मलाई प्रशन्न पौडेलले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा विदुर पाण्डेको छायांकन र दीपक विष्टको लगानी छ । दीपक विष्टलाई लगानीमा सुनिल विष्ट र मिलन लामाले सघाएका छन् ।
रिलिज मिती तय नभैसकेको फिल्ममा अनुपविक्रमसंगै सन्ध्या केसी, विनोद न्यौपाने, इशान ढकाल, किरन लाकौल, दीपक पहाडी लगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
Tags:anup bikram shahi
‘कमले’ बन्दा यस्तो देखिए अनुपविक्रम (भिडियो)0out of5based on0ratings.0user reviews.
‘फाटेको जुत्ता’मा प्रियंका र सौगातको झगडा !
‘एनएफडीसी’ अवार्डको उत्कृष्ट पाँचको मनोनयन
Box office	Feb 10, 2018
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – लगातार ४ सिनेमा हिट दिएका अभिनेता अनमोल केसीको स्टारडम पुन:…
Nepal	Feb 4, 2018
स्कटल्याण्डमा ‘कृ’ जोडीको रोमान्टिक मूड
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – अनमोल केसी स्टारर ‘कृ’ रिलिज हुन् अब ५ दिन मात्र…
‘इनक्रिडीबल्स २’ रेकर्ड, यो शुक्रबार नेपाल प्रदर्शन Jun 20, 2018
सय करोड क्लबमा सलमानको नरोकिने रेस ! Jun 20, 2018
दयाहाङको ‘भैरे’ ट्रेलर रिलिज Jun 18, 2018
डेब्यु समाचारप्रति तेरियाको खण्डन Jun 18, 2018